Raadinta webka ugu raqiisan - [La-tashiga Caalamiga ah]
> Raadinta webka ugu raqiisan
2018-09-06 2019-05-22 La-tashiga Caalamiga ah Web
Raadinta webka ugu raqiisan : Doorashada 1aad ee ugu fiican ee la qabto martigelinta 2018 Bluehost: 2.95 $ / 2.55 €
Raadinta webka ugu jaban uguna fiican
Qiimaha sahlan oo la wadaago goobaha sahlan
Top 10 webka ugu fiican ee martigelinaya hal website
Adeegyada marti gelinta websaydhka
Shabakada la qiimeeyo ee martigelinaya ganacsiga yaryar
Adeegyada martigelinta websaydka oo qiimo leh
Raadinta webka ugu jaban
Ugu fiican martigelinta martigelinta WordPress
Webka ugu fiican martigelinta doorashada 2018:
websiteka shakhsi ahaaneed ee ugu fiican ee martigelinaya Bluehost $ 3 bishiiba,
webka ugu fiican ee marti-gelisa dhowr domains, Bluehost for $ 8 bishii,
Hostgator bixiyaha ugu fiican ee martigelinta ee loogu talagalay 8.7 $ bishiiba.
Webka ugu sareeya ee martigelinta doorashada 2018 waa Bluehost
Iyada oo tartan badan, iyo bandhigyo aan mar walba la barbar dhigi karo, waa mid aad u adag in la helo websiteka saxda ah ee martigelinta, haddii ay noqoto mid ka mid ah bogga, blog wordpress ah, martida shabakada ee horjooge, marti gelin badan oo badan martigelinta ama daruur martigelinta.
Si kastaba ha ahaatee, tilmaan-bixiyahan sahlan waa inuu kaa caawiyaa inaad sameyso doorasho degdeg ah oo iftiimin leh oo ka dhexeeya qaar ka mid ah shirkadaha ugu fiican ee martigeliyaasha adduunka ee 2018-ka, iyagoo tixgelinaya tobanka shirkadood ee ugu sareeya.
EX2 qiimaha webhosting raqiis ah kuwaas oo martigelinaya boggan
Qaabka ugu raqiisan si aad u marto bogga internetka ee dhowr bixiyeyaasha - canshuur ayaa laga yaabaa inay isbedelaan iyadoo ku saleysan deganaanshahaaga, laakiin codso si siman adeeg bixiye kasta.
Adeegyada boggaan boggaga internetka ah waa tusaale wanaagsan oo ka mid ah macaamiisha websaydhka ugu fiican oo qiimo leh, labaduba waa kuwa loo baahan yahay in ay martigeliyaan website-ka.
Adeegyada martigelinta ganacsiga ee websaydhka, si wanaagsan u eeg hoosta mawduucyada kala duwan ama daruuriga ah.
Dhammaan sicirka lacagta doolarka Maraykanka iyo Euros ee adeegyada la barbardhigo bishiiba, oo ku saleysan liiska 3 sano ah.
Doorashada 1aad ee ugu fiican ee la qabto martigelinta 2018 Bluehost: 2.95 $ / 2.55 €
Doorashada 2aad ee doorashada gaarka ah ee martigelisa Hostinger: 3.35 $ / 2.9 €
Doorashada 3aad ee doorashada gaarka ah ee martigelinta Hostpapa: 3.41 $ / 2.95 €
Booqashada: 3.99 $ / 3.45 €
Raadinta webka ugu raqiisan : Doorashada 2aad ee doorashada gaarka ah ee martigelisa Hostinger: 3.35 $ / 2.9 €
Raadinta webka ugu raqiisan : Doorashada 3aad ee websaytka gaarka ah ee martigelinta Hostpapa: 3.41 $ / 2.95 € Goobta martigelinta ee horumarsan
Isbarbar-dhigga dalabyada ugu wanaagsan ee bixiye kasta, oo ay ku jiraan shahaadada IP-ga iyo SSL.
Inta badan iyaga bixiyaan xal domain hosting lacag la'aan ah waxaa ku jira webka jaban raqiis ah, ugu yaraan sanadka ugu horeeya.
Doorashada 1aad Bluehost: 7.95 $ / 6.88 €
Doorashada 2aad ee Doorashada: 11.62 $ / 10.05 €
Doorashada 3aad A2hosting: 11.95 $ / 10.34 €
Hantidhawrka: 9 $ / 7.79 € (wax IP ah oo aan qoondeeyn karin)
Hostpapa: 13.81 $ / 11.95 € (aan lahayn IP-ga, qiimaha aan la heli karin)
Hoos-u -dhisid: 19.32 $ / 16.71 €
Raadinta webka ugu raqiisan : Doorashada 1-aad ee xulashada badan ee Bluehost: 7.95 $ / 6.88 €
Raadinta webka ugu raqiisan : Doorashada 2aad ee doorasho badan oo martigelinaysa Hostgator: 11.62 $ / 10.05 €
Raadinta webka ugu raqiisan : Doorashada 3aad ee kala duwan ee martigelinta A2hosting: 11.95 $ / 10.34 €
Isbarbardhiga mawduucyada websaydhku wuxuu noqon karaa mid caqli gal ah, maadaama ay marti-geliyuhu bixiyaan adeegyo kala duwan Si kastaba ha ahaatee, marka la barbardhigo isbarbardhigga dalabka oo ahaa midka ugu dhow ee 4GB ee adeegsiga xusuusta server.
Doorashada 1aad ee Hostgator: 8.67 $ / 7.5 €
Doorashada 2aad Bluehost: 8.95 $ / 7.74 €
Doorashada 3aad ee martida: 17.10 $ / 14.79 €
Raadinta webka ugu raqiisan : Doorashada 1aad ee Hostgator: 8.67 $ / 7.5 €
Raadinta webka ugu raqiisan : Doorashada 2aad Bluehost: 8.95 $ / 7.74 €
Raadinta webka ugu raqiisan : Doorashada 3aad ee martida: 17.10 $ / 14.79 €
Inta badan dhammaan adiga oo ka sareeya heshiisyada webhost waxay u ogolaanayaan farsamooyinka soo socda iyo isticmaalka:
websaydhka 'ecommerce' hosting,
server linux hosting,
webka google web hosting,
websaytka wordpress hosting,
Maxay tahay xawaaraha bandhiga ee martigelinta?
Xaddiga xawaaraha waa xaddiga macluumaadka la bedeli karo, badanaa bishiiba. Xadka ka sarreeya, dheeraadka ah waa in la bixiyaa.
Si kastaba ha ahaatee, maalmahan, webka ugu fiican ee martigelinaya 2016 iyo wixii ka dambeeya midka uu yahay goobtan oo martigelisay, waxay bixisaa xawaaraha aan xadidneyn ee leh websaydhadooda martigelinta xalalka.
Diiwaanka hudheelka ah ee la heli karo ee lagu soo bandhigay kor ku xusan waa bog internet oo weyn martigelinaya waana inuu ku qanciyaa isticmaalka shakhsi ahaaneed iyo ganacsi macquul ah oo martigelinaya webka yar. Isticmaal badan oo adeegsanaya ama boggaga internetka, ka feker sidaad u heli laheyd server-naqshad farsamo ah, kaas oo noqon doona mid ku habboon bogagga internetka ee ugu sareeya.
EX2 oo martigelinaysa boggan
Raadi jaban oo raqiis ah oo caalami ah ayaa adagtahay in la helo, iyada oo bixinno fara badan oo laga helo internetka, iyo adkaanta helitaanka shabakadda ugu fiican ee martigelinta bogga shakhsi ahaaneed.
Waxaa jira meelo badan oo webhost raqiis ah, waxaana inta badan muhiim ah in la helo macaamiisha webka ee ugu jaban iyo domain sida baako.
Magaca domainka waxaa badanaa la bixiyaa sanadka ugu horeeya ee xirmada shabakada shakhsi ahaaneed, qiimaha magacuna wuxuu ku dhow yahay isla meel kasta, maadaama ay go'aaminayso ICANN ama hay'adaha degaanka ee maamulaya magacyada domain.
Eeg hoosta xulashada shirkadda martigelinta, shakhsi ahaan la tijaabiyey lana ansixiyay - bogga shakhsi ahaaneed ee ugu fiican ee naga mid ah waa Bluehost 2.95 $.
Webka ugu fiican martigelinta bogga shakhsi ahaaneed
WordPress oo bilaash ah oo lacag la'aan ah oo loogu talagalay websaydo ka badan 10000 oo booqasho ah bishiiba, oo leh dakhliga soo kordhay
Webka ugu jaban ee martigelinaya caalamka waa ay adag tahay in la qeexo. Waxay kuxirantahay goobtaada, goobta booqashadaada, miisaaniyadaada, tiknoolajiyada loo isticmaalo, iyo fursado kale oo badan.
Si kastaba ha ahaatee, shabakadda shakhsiyeed, mid ka mid ah websaydhka ugu fiican raqiisan iyo domain wuxuu la socdaa buluugga:
Raadinta webka ugu jaban and domain international
Wixii website-ka Wordpress, mid ka mid ah websaydhka ugu raqiisan ee loogu talagalay bogagga intarnetka ee ka badan 10000 soo booqo waa Ezoic:
Raadinta webka ugu raqiisan : Bluehost qiimaha ugu jaban ee web hosting iyo domain caalami ah
Hudheel furfuran oo loogu talagalay WordPress, waa xitaa macquul? Haa, waa Ezoic, oo ah shakhsi Google ah oo la aqoonsan yahay oo maamula xayaysiiska boggaaga, adiga oo dooranaya xayeysiisyada ugu wanaagsan ee keenaya dakhliga ugu sareeya ee ka soo jeeda lamaanayaasha kala duwan.
Haddii aad haysatid in ka badan 10000 oo booqasho ah bishiiba, iska diiwaangali adiga oo isticmaalaya isku-xirka hoose, waxayna ku marti-gali doonaan boggaga internetka oo bilaash ah, iyo kordhinta dakhliga ka soo baxa Google adSense adigoo ujeeddadiisu tahay inaad la tartanto wakaaladaha kale ee adreeska.
Kuugu fiican martigelinta WordPress ee ugu fiican
Raadinta webka ugu raqiisan : Ugu fiican martigelinta martigelinta WordPress
webka ugu fiican martigelinaya 2018, Raadinta webka ugu jaban uguna fiican, website-hosting, daruuriga martigelinaya, websaytka wordpress, websaydhka ugu fiican ee martigelinta, kuwaas oo martigelinaya boggan, martigelin la wadaago, website-yada sare, webka google ee martigelinta, marti-galiyaha server-ka ah, websaydhka istiraatiijiga ah, webka casriga ah, web hosting php mysql, marti gelinta websaydhka, Adeegyada martigelinta webka ee la awoodi karo, heshiisyada webhost, webhost jaban, webka ugu fiican martigelinaya 2018, marti gelinta bogga internetka, shirkadaha ugu fiican ee martigeliya, blog-wordpress martigelinta, halkaa oo ay ku yaalaan goobtan, webka ugu sareeya martigelinta, website-ka gaarka ah martigelinta,